တရုတ် A463 အလူမီနီယမ်အပူပူ Dip Aluminum Coated Steel Coil ကိုစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Zhanzhi
2. အထူ: 0.25-0.8mm
3. အနံ: 800mm မှ 1250mm မှအားလုံးရရှိနိုင်
4. coil အလေးချိန် - သုံးစွဲသူ၏တောင်းဆိုချက်အရ 3-8MT မှဖြစ်သည်
5.AS အပေါ်ယံပိုင်း: 12-25μm
6.Post- ကုသမှုအမျိုးအစား: ဆီ, Non ကုသမှု
7. နည်းပညာ: ပူပြင်း
ငါ Alumininized အမျိုးအစား
II ကို AIumininized အမျိုးအစား
>> အပူခံနိုင်ရည် - အပူချိန် ၄၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိထိတွေ့မှုကြောင့် ALCOAT သည်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည်။ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိကွိုင်နှင့်အအေးခံသည့်သံမဏိကွိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုမထိခိုက်ပါ။
>> Heat Reflectivity: ALCOAT ၏လှပသောမျက်နှာပြင်သည်အပူချိန် ၄၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အပူ၏ ၈၀% ခန့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၎င်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှုန်းသည် ၉၅% အထိတက်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်များရှိသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ဤသည်က ALCOAT ကိုမီးဖိုချောင်သုံးများ၊ မီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်များနှင့်ရေနံမီးဖိုများတွင်အပူရောင်ပြန်ပြားထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
>> Corrosion resistance Aluminium သည် Mn, Mo, Cr, W, Cd, Fe, Zn တို့ထက် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်အခင်းသည်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအချို့အပြင်မျက်နှာပြင်ချေးခြင်းကြောင့်သွပ်ရည်စိမ်ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
>> စိမ်းလန်းသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်: ၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမထိခိုက်စေပါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်မှုထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအခင်းသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်
>> ထုတ်ယူခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်: အလူမီနီယံသံမဏိပြားများကိုအခြားသံမဏိပြားများနှင့်အတူတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်
>> ဂဟေဆော်နိုင်မှု - အလူမီနီယမ်သည်ပျော့ပျောင်းသောကြောင့်၊ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူပြီး၎င်း၏စွမ်းအားပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှုကြောင့်ဂဟေဆော်ထားသောအစိတ်အပိုင်းသည်အပူလွန်ကဲမှုရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အပေါ်ယံလွှာသည်သွပ်ရည်စိမ်အရည်ပျော်မှတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်စီးဆင်းရန်မလွယ်ကူပါ၊ အရည်ပျော်areaရိယာသည်အလွန်နည်းသောကြောင့်သွပ်ရည်စိမ်သည့်သံမဏိပြားများကိုလက်ရှိမြင့်မားသောအသုံးအဖြစ်မသုံးရန်မလိုအပ်ပါ။
>> မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်: ၎င်းသည်ကြာရှည်ခံသည့်တောက်ပမှု၊ တိုက်စားမှုခံနိုင်စွမ်းနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၁) မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ - မာဖလာ၊ မီးခိုးပိုက်၊ လောင်စာဆီ
၂) အသုံးအဆောင်များ - လျှပ်စစ်မီးဖို၊ ဓာတ်ငွေ့အကွာအဝေး၊ ပေါင်မုန့်စက်၊ မီးဖိုချောင်သုံး၊ မီးဖိုချောင်သုံး၊ အပူပေးစက်၊ လေအေးပေးစက်၊ အပူပေးစက်၊ မီးဖို၊ အပူပေးစက်၊ အပူပေးစက်၊ လေမှုတ်စက်၊
၃။ ဆောက်လုပ်ရေး - ဓာတုစက်ရုံများ၏နံရံများနှင့်ခေါင်မိုးများ၊ မီးခံနိုင်သောနံရံများ
ရှေ့သို့ CRNGO အေးအေးဆေးဆေး non-oriented ဆီလီကွန်သံမဏိကွိုင်
နောက်တစ်ခု: 201B သံမဏိကွိုင် 2B မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်
20 gauge လူမီနီယံစာရွက်သတ္တု
လူမီနီယမ် Coated သံမဏိ
Astm A463 လူမီနီယံသံမဏိ
Hot Dip လူမီနီယံသံမဏိကွိုင်